FITSIDIHANA VETIVETY : Nandalo tao Toamasina ny sambo nitondra manamboninahitra sinoa
Ny zoma lasa teo no tonga tao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ny sambo lehibe, nitondra ireo manamboninahitra sinoa, izay hanao fivahiniana fohy eto Toamasina, hanampy ny famatsiana ara-tsakafo na ilay antsoina amin’ny teny vahiny hoe “ravitaillement”. 16 mai 2017
Avy hatrany dia nitsidika tamin’ny fomba fanajana ny Ben’ny tanàna, Elisée Ratsiraka ireto manamboninahitra sinoa ireto, tao amin’ny biraon’ny fiasany.
Nitarika ireo vahiny ny Lehiben’ny Masoivoho sinoa, miasa sy monina eto Madagasikara. Fitsidihana izay notarihin’ny ambasadaorin’ny firenena sinoa monina eto Madagasikara. Noararaotin’ny Ben’ny tanàna tamin’io fihaonana io ny fanambaràna mahakasika ireo tetikasany ny amin’ny fanamboarana ny kianja marolafy na “terrain Omni-sport” handraisana ny taranja maromaro, izay kendrena hapetraka isaky ny boriborintany dimy eto Toamasina sy ny toerana fidiovana sy fivoahana ary fanasana lamba, ka toerana somary misintaka kely ny tanàna no hahazo tombony amin’izao tetikasa izao, toy ny eny Tsarakofafa.
Nomarihiny ihany koa fa efa madiva ho vita ny asa fanadiovana ny tanàna na ny “assainissement” ka hiroso amin’ny fanatanterahana ireo fanamby napetraka tamin’ny vahoaka nandritra ny fampielezan-kevitra. Manomboka eto, nanome toky ny Ben’ny tanàna, Elisée Ratsiraka fa hanakaiky hatrany ny vahoaka ny tenany. Rahampitso talata 16 mey izao no hanainga hiala eto Toamasina ny sambo mitondra ireto delegasiona sinoa ireto.
Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (900) 2 mars 2021 Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (461) 5 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (186) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (97) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (95) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (84) 2 mars 2021